Bhuku Rekutanga reMakoronike 22:1-19
Dhavhidhi anogadzirira zvekuvakisa temberi (1-5)
Dhavhidhi anorayira Soromoni (6-16)
Machinda anorayirwa kuti abatsire Soromoni (17-19)
22 Dhavhidhi akabva ati: “Iyi ndiyo imba yaJehovha Mwari wechokwadi, uye iyi ndiyo atari yezvibayiro zvinopiswa ichashandiswa nevaIsraeri.”+ 2 Dhavhidhi akabva arayira kuti vatorwa+ vaigara munyika yeIsraeri vaunganidzwe, uye akavapa basa rekucheka nekuveza matombo ekuvakisa imba yaMwari wechokwadi.+ 3 Dhavhidhi akaunganidzawo simbi dzakawanda chaizvo dzekugadzirisa zvipikiri zvemasuo emagedhi uye dzekugadzirisa zvekusungisa, nemhangura yakawanda chaizvo yaisagona kuyerwa,+ 4 nematanda emisidhari+ asingaverengeki, nekuti vaSidhoni+ nevaTire+ vakauya nematanda emisidhari akawanda chaizvo kuna Dhavhidhi. 5 Uye Dhavhidhi akati: “Mwanakomana wangu Soromoni mudiki uye haana ruzivo,+ asi imba ichavakirwa Jehovha ichange yakanaka chaizvo,+ zvekuti mukurumbira wayo nekunaka+ kwayo zvichazivikanwa kunyika dzese.+ Saka ndichagadzirira zvekuti azoshandisa.” Saka Dhavhidhi akagadzirira zvinhu zvakawanda chaizvo asati afa. 6 Uyewo akashevedza mwanakomana wake Soromoni akamurayira kuti avakire Jehovha Mwari waIsraeri imba. 7 Dhavhidhi akaudza mwanakomana wake Soromoni kuti: “Ndaiva nechido mumwoyo mangu chekuti ndivakire zita raJehovha Mwari wangu imba.+ 8 Asi shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti, ‘Wakadeura ropa rakawandisa, uye hondo dzawakarwa ihuru. Hauzovakiri zita rangu imba,+ nekuti wakadeura ropa rakawandisa panyika pamberi pangu. 9 Uchava nemwanakomana+ uyo achava munhu werugare,* uye ndichamuzorodza pavavengi vake vese vari kumativi ese;+ nekuti achanzi Soromoni,*+ uye ndichaita kuti vaIsraeri vave nerugare nerunyararo mumazuva ake.+ 10 Ndiye achavakira zita rangu imba.+ Achava mwanakomana wangu, uye ini ndichava baba vake.+ Ndichasimbisa chigaro cheumambo hwake pana Israeri nekusingaperi.’+ 11 “Zvino mwanakomana wangu, Jehovha ngaave newe, ubudirire, uvake imba yaJehovha Mwari wako, sezvaakataura pamusoro pako.+ 12 Jehovha ngaangokupa ungwaru nekunzwisisa+ paachakupa simba rekutonga Israeri, kuti uchengete mutemo waJehovha Mwari wako.+ 13 Uchabva wabudirira kana ukanyatsochengeta mirau+ nezvakatongwa zvakarayirwa Mozisi naJehovha kuti ape Israeri.+ Shinga, usimbe. Usatya kana kuvhunduka.+ 14 Ndakashanda zvakaoma kuti ndiunganidzire imba yaJehovha matarenda* 100 000 egoridhe nematarenda 1 000 000 esirivha, nemhangura yakawanda chaizvo nesimbi+ zvisingagoni kuyerwa uremu hwazvo, uye ndakagadzirira matanda nematombo,+ asi uchazozviwedzera. 15 Une vanhu vazhinji vanoita basa, vanocheka matombo nevanoveza matombo,+ nevavezi vematanda, nevanhu vakawanda vane unyanzvi pamabasa akasiyana-siyana.+ 16 Goridhe racho, sirivha, mhangura nesimbi hazvigoni kuyerwa.+ Simuka utange basa, uye Jehovha ngaave newe.”+ 17 Dhavhidhi akabva arayira machinda ese eIsraeri kuti abatsire mwanakomana wake Soromoni achiti: 18 “Jehovha Mwari wenyu haasi pakati penyu here uye haana kukuzorodzai kumativi ese here? Nekuti akandipa vagari vese vemunyika, uye nyika yakundwa pamberi paJehovha nepamberi pevanhu vake. 19 Zvipirei nemwoyo yenyu yese nemweya* yenyu yese kuti mutsvage Jehovha Mwari wenyu,+ mutange kuvaka nzvimbo tsvene yaJehovha Mwari wechokwadi,+ kuti muunze areka yesungano yaJehovha nemidziyo mitsvene yaMwari wechokwadi+ kuimba ichavakirwa zita raJehovha.”+
^ ChiHeb., “wezororo.”